Ciyaaraha kubada cagta ee ugufiican PC taariikhda oo dhan | Golaha Moobaylka
Waxaan dooneynaa inaan idinla wadaagno qaar ka mid ah cayaaraha kubbadda cagta ee ugu fiican kombuyuutarka waana cadnahay in liistadu aysan aad u weyneyn maadaama aan ka warqabno xafiiltan, duel iyo kuwo kale oo sannado lagu hayay FIFA iyo PES.
Sida iska cad waxaa jira qaar kale oo badan, ciyaaraha sida Maamulaha Kubadda Cagta sidoo kale si adag ayay u garaacayaan muddooyinkii ugu dambeeyay.
1 Ciyaaraha kubbadda cagta ee ugu fiican PC-ga oo leh jawi dib-u-dhac ah
2 FIFA iyo PES: Ciyaaraha kubada cagta ee maanta ugu fiican
3 Ciyaaraha maamulaha ugu fiican ee aad ku qaadatid kooxdaada kubada cagta
Ciyaaraha kubbadda cagta ee ugu fiican PC-ga oo leh jawi dib-u-dhac ah
Kiiskeyga waxaan dhihi karaa ciyaaraha kubada cagta marwalba way garab taagnaayeen Inbadan "halyeey" waxaan kuu sheegayaa inaan bilaabay inaan ka ciyaaro Comodore Amiga ciyaar la yiraahdo Kick Off, oo aan dib ugu laabto 1989, haa waqtiga dinosaurs-ka. Kick Off-kaani wuxuu ahaa muuqaal fiidiyoow ah oo fiidiyoow ah oo kubbadda cagta ah oo uu abuuray Anco oo uu barnaamij ka diyaariyey Dino Dini, waanu isla dheggannahay ...
Waa kan video yar sidaa darteed maahan inaad ka raadsato ciyaarta shabakadaha bulshada. Markii la arkay ciyaartan runti waa mid soo jireen ah maalmahaasna arcadooyinku waxay lahaayeen ciyaaro yar oo kubbadda cagta ah, sidaa darteed waxaan kuwada soconnay kuwan Amstrad ama Comodore. Waqti kasta oo aan dhageysto muusigga ciyaarta hore ayaa timahaygu dhammaadaan, kani waa fiidiyowga ku raaxayso:
Laakiin aan iska dhigno ciyaarihii waagii hore oo aan la aadno kuwa hadda socda ... Mise maya?
Waana taas hadda waxay umuuqataa in quraafaadkii Kick Off uu dib ugu soo laabtay si uu ula joogo nooc ka mid ah barnaamijka ciyaarta Steam kaas oo isla magaca uu doonayo inuu ka dhex dhigo cinwaannada ugu xiisaha badan maanta. Haa dadyahow, Dino Dini's Kick Off Revival ayaa maanta banaanka jooga inkasta oo ay tahay ciyaar dib-u-dhac leh oo leh ruuxaas wuxuu u egyahay asalka 90-meeyadii. Halkan waxaad ka arki kartaa fiidiyow:
Haddii aad rabto inaad soo dejiso waad sameyn kartaa si toos ah uga socota xiriiriyahan Steam, qiimaheeda waa 9,99 euro Dhab ahaanna waxaan dhihi karnaa waxay nagu qaadan doontaa waqtiyadii ina dhaafay.
Ciyaar kale oo aan ka fiirsan karno liiska iibsiyada suurtagalka ah inaan ku qaadno waqti xiiso leh kubbadda cagta PC-ga hortiisa ama xitaa Mac-dayada, waa Super Arcade Soccer. Midkani sidoo kale waxaa laga heli karaa dukaanka ciyaarta Steam wuxuu naga qaadanayaa inta udhaxeysa kulamada ugu hada socda iyo kuwa ugu halyeeyga badan. Waa arcade ka duwan kuwa kale waxaadna la qaadan kartaa waqti fiican oo aad ku ciyaarto.
Qiimaha kulankaan waa 4,99 euro sidaas darteed ciyaar qaali ah haba yaraatee inkasta oo aadan ka fileynin matoor garaaf garaysan oo caano ah iyo sidoo kale sawiro aan fiicneyn. Waxa ugu muhiimsan halkan waa in xoogaa waqti la qaato oo la ciyaaro tanina waxay u noqon kartaa xulasho wanaagsan kuwa jecel kubbadda cagta ee doonaya inay isku dayaan ciyaaro kale oo ka baxsan cinwaanada caanka ah.
FIFA iyo PES: Ciyaaraha kubada cagta ee maanta ugu fiican
Tani waa wax aad u wanaagsan laakiin shaki la’aan boqorada suuqa taageerayaasha oo dhan waa la qaataa oo taxanaha ciyaaraha Fifa iyo PES waxaa loogu talagalay dhammaan kuwa jecel nooca ciyaarta kubbadda cagta ee loo yaqaan. Xaqiiqdu waxay tahay inaad ku raaxeysan karto qalabka kombiyuutarka, PC iyo maalmahan casriga casriga ah, sidaa darteed ma jiraan wax intaa ka badan oo laga sheegi karo iyaga.
Waxaan si daacad ah u aaminsanahay inaysan jirin wax dood ah oo macquul ah marka aan ka hadlayno labada kulan iyo in kasta oo dadka isticmaala ay had iyo jeer leeyihiin dood ku saabsan in midkood uu ka fiicnaado kan kale oo xitaa kooxaha kubada cagta ee dhabta ah ay heshiisyo la galaan mid ama mid kale,Labada cinwaanba waxay umuuqdaan kuwo muhiim noo ah aruurinta ciyaaraha kombiyuutarka, Console ama wax la mid ah.
Fifa 21 shaki la’aan waa isha midig ee malaayiin isticmaale iyo Ciyaaraha EA waxay ogaayeen sida ugu wanaagsan ee looga faa'iideysan karo sheekada taasi waxay cusbooneysiisaa sanadba sanadka ka dambeeya iyadoo la hagaajinayo garaafka, mashiinkeeda ciyaarta iyo had iyo jeer ujeeddooyinka ugu fiican si ay u noqoto ciyaarta ugu fiican sanadka.
Dabcan way sii fiicnaanayaan oo way sii fiicnaanayaan kiiskan Fifa 21 ayaa ah waxa ugu badan ee aad ka heli karto adduunka ciyaaraha kubbadda cagta ... Mise maya? ... Waana arrin macquul ah tartanka FiFa 21 waa mid ka mid ah kuwa awoodda badan Isbeddelada muhiimka ah ee waqtiga iyo jiilka kasta oo cusub ayaa keenaya war muhiim ah oo maanta ciyaartoy kubbadda cagta daacad u ah jacaylka, waxaan si macquul ah uga hadlaynaa PES.
Sagaarka PES waa mid ka mid ah kuwa muhiimka u ah waaxda ciyaaraha kubbadda cagta kiiskan waxaan ku ammaani karnaa oo keliya shaqada laga qabtay xilligan horumariyaha. Iyada oo ay ku xiran tahay ciyaartoy badan oo ugu fiican taariikhda kubada cagta Leo Messi, daboolka, PES waxay sii wadaa inay ku guuleysato ciyaartoy waana shaki la’aan mid kale oo muhiim u ah kombuyutarkaaga.
Ku dhawaaqida rasmiga ah ee ciyaartu waa mid naxariis daro ah! Inta udhaxeysa labadan kulan, xaqiiqdii waan doorbidaa labadaba ... Suuragal ma ahan in mid ama midkale la xusho waqtigan, marka waxaa ugufiican inaad labadoodaba yeelato oo aad awoodid inaad la ciyaarto iyaga markasta oo aad dareento sidaad tahay Qiimaha kuwan aad horey u ogtahay in aysan hoos uga dhicin 50 euro (uguyaraan) wadankeena ilaa aad ka doorato nooc ciyaarta ka mid ah sanadkii hore, marka dareenkaan ma jiraan wax badan oo aan dhihi karno.
Ciyaaraha maamulaha ugu fiican ee aad ku qaadatid kooxdaada kubada cagta
Ciyaarahaan oo uu isticmaalehu ku maareyn karo kooxdooda ayaa bilaabay inay soo baxaan dhowr sano ka hor iyo sida murashaxa ugu weyn, wixii aan ka arki karno suuqa, waxaan ka helnaa Maareeyaha Kubadda Cagta. Xaaladdan oo kale, qaybtii 21aad ee ciyaarta ayaa timid waana hubaal inay annaga noo muuqato waxa ugu dhaw ee hogaaminaya kooxdaada kubada cagta ee xirfadlayaasha ah isla markaana noqda halyeeyga guulaha iyo guuldarada.
Halkan waxaad ka heli kartaa ciyaarta Maamulaha Kubadda Cagta 2021 haddii aad leedahay xisaab Steam ah, haddii kale waxaad had iyo jeer ka iibsan kartaa dukaan jireed. Waxa cad waa taas Noocyada noocan ah ee uu adeegsaduhu u dhaqmo sida tababaraha ayaa sidoo kale hela kuwa daacadda u ah laga bilaabo markay suuqa ku dhufteen. Shaqsi ahaan, ma ihi taageere weyn oo nuucaan ah ciyaarta, waxaan jeclahay inbadan inaan kooxdeyda kaxeeyo garoonka kubada cagta laakiin kuwa yaqaan ee ciyaara Kubada Cagta ayaa aad uguxiran waxa loo maleynayo inay kamid yihiin kuwa ugu fiican waaxdooda.
Waxaa jira ciyaaro kubbadda cagta ah oo aad u yar oo loo yaqaan kuwa lagu magacaabay qodobkan. Laakiin haddii aad taageere u tahay mid aan ka soo muuqan isku-duwidan yar, noogu reeb faallooyinka magaca hoose si ay isticmaaleyaasha kale u ogaadaan oo yaa ogaanaya haddii maalin uun ay kaa hor imaan doonaan ciyaar kubbadda xiisaha leh .
Wadada buuxda ee maqaalka: Golaha Moobaylka » Ciyaaraha » Ciyaaraha kubada cagta ee ugufiican PC taariikhda oo dhan
XPS file: Waa maxay iyo sida looga furo kombiyuutarkaaga ama mobiladaada
Noocyada teebabka: intee le'eg yihiin iyo kala duwanaanshaha ugu weyn